फिल्मको बोल्ड सिन छायाँकन हुँदैथियो, अनिल कपुरले के गरे ? भड्किइन् डिम्पल कपाडिया « Etajakhabar
फिल्मको बोल्ड सिन छायाँकन हुँदैथियो, अनिल कपुरले के गरे ? भड्किइन् डिम्पल कपाडिया
एजेन्सी । के तपाईलाई थाहा छ बलिउडकी दिग्गज अभिनेत्री डिम्पल कपाडिया अभिनेता अनिल कपुरमाथि रिसाएकी थिइन् । यो धेरै चर्चा हुने कथा हो । वास्तवमा अभिनेता अनिल कपुर र डिम्पल कपाडियाले धेरै फिल्ममा सँगै काम गरेका थिए । दुवै उद्योगका राम्रा कलाकार हुन् । अनिल र डिम्पलले फिरोज खान निर्देशित फिल्म जामबाजमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यो कथा यही फिल्मसँग सम्बन्धित छ ।
जान्नुहोस् कथा के हो ?
डिम्पल कपाडिया र अनिल कपुरको यो फिल्ममा बोल्ड सिन पनि छ । फिल्मको यो दृश्य निर्देशक फिरोज खानले बैंगलोरस्थित आफ्नो फार्म हाउसमा खिचेका हुन् । अनिल कपूर र डिम्पलबीचको यो बोल्ड दृश्य जब जब तेरी सूरत देखु गीतमा खिच्ने थियो। त्यतिबेला डिम्पलले अभिनेता अनिल कपूरलाई खासै मन पराउँदैनन् । यसको पछाडि अनिल कपुर र सनी देओलबीचको दुश्मनी रहेको बताइएको छ । अर्कोतर्फ, सन्नी देओलका लागि डिम्पलको मनमा विशेष ठाउँ थियो र दुबैको राम्रो मित्रता पनि थियो ।
फिरोज खानले डिम्पल र अनिल कपूरलाई बोल्ड दृश्यको बारेमा बताए। त्यसपछि उनले अनिल कपूरलाई गीतमा बोल्ड दृश्यकोका ​​लागि आफ्नो शर्ट उतार्न भने। डिम्पल कपाडियाले यो दृश्य गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
यसपछि फिरोज खानले उनलाई बुझाएका थिए । त्यसपछि डिम्पल कपाडिया अभिनेता अनिल कपूरसँग यो बोल्ड दृश्य दिन राजी भइन् । यो फिल्म रिलिज भएपछि यो बोल्ड दृश्यको निकै चर्चा भएको थियो ।